एअर होस्टेजलाई प्रहरीले पुरुषको कोठामा रंगेहात समातेपछि…… – Online Nepal Site
नुवाकोट तारकेश्वरका सोनाम तामाङको साउदीमा काम गर्दागर्दै अल्मोनियम मेसिनले थिचेर मृत्यु
प्रहरीको स्कर्टिङमा नवलपरासीबाट काठमाडौं आउँदै विप्लव
बिनयकी हुनेवाला श्रीमतीले भनिन्, ‘बिनयको लागि म यो जुनी नै कुर्न परे पनि तयार छु’ (भिडियो)
बिन्दास ज्योति विगत सम्झेर झारिन् आँशु : भन्छिन् ‘जागिर लगाइदिन्छु भनेर बोलाएर मलाई होटलको कोठा सम्म लगे’ (भिडियो हेर्नुस्)
यिनै हुन् धादीङमा घाँस बो’केर घर जाँदै गर्दा डोजर चालकले जि’उदै पु’रेकी सरस्वती कुमाल !
करोडौंको घरसम्पति आफ्नै डा. छोराले सबै हडपेर कु’टपिट गर्दै सडकमा पुर्‍याए पछि, आमाबुबा मिडियामा (भिडिओ)
मुख्य पृष्ठ /Intresting/एअर होस्टेजलाई प्रहरीले पुरुषको कोठामा रंगेहात समातेपछि……
एअर होस्टेजलाई प्रहरीले पुरुषको कोठामा रंगेहात समातेपछि……
1,153 Less thanaminute
काठमाडौ । २३ बर्षे डेरिन क्रफोर्ड दुवई प्लिसको फ’न्दामा परेपछि सन्सारभर हंगामा भएको थियो । अहिले उनी २ महिने कारागार बसाई पछि मुक्त भएकी छिन् । डेरिन युएईमा काम गर्दथिन् र र दुबईमा बसोबास गर्दथिन् । उनी एक मानिससँग डिनरको लागि बाहिर गएकी थिइन् र उनै पुरुषको अपार्टमेन्टमा ती एअर होस्टेज गएकी थिइन् ।
डेरिन ती पुरुषको कोठामा पुगेको केही समयमै दुबइका पुलिसले उनीहरु बसेको कोठामा छापा मा’रे । त्यहाँ गाँ’जा समेत भेटिएपछि डेरीन पक्राउ परिन् । लिभरपुल, बेलायतकी स्थायी बासिन्दा यी सुन्दरीलाई जुन २१ मा कु’ख्यात अल बर्शा जे’लमा हालिएको थियो ।
रिभरसाइडका लागि सांसद किम जॉनसनले बताए कि उनको रिहाइ पछि डेरिनले आफ्नो परिवारसँग कुरा गरेकी थिइन । उनी जे’लबाट छुटेको पुष्टि ती सांसदले गरे । बेलायती एयर होस्टेसले दुबईको जे’लमा २ महिना रोटी र पानीको सहारामा बिताएको बताईन् ।
डेरिन, जसले ११ वर्षको उमेरमा आफ्नी आमा गुमाएकी थिइन् उनलाई उनकी सानीमाले हुर्काइन्, सेप्टेम्बर २०१८ मा एयरलाइन्समा काम पाए पछि उनी दुबई सरेी थिइन् ।
ती एयर होस्टेसले आफन्तहरूलाई भनिन् कि उनी एक मानिससँग डेटमा जान राजी भएकी थिइन् । उनीसँगै गएका पुरुष पनि बेलायती नै भएको र उनी व्यवसायी रहेको उनले बताईन् जे’लबाट छुटेपछि उनले आफू आफ्नो सन्सारमा फर्किन पाएको भन्दै खुशी ब्यक्त गरेकी छिन् ।
यस्ता संकेत देखिए हुन्छ धन लाभ
भगवान विष्णुको अवतारका रुपमा पूजा गरिने स्वर्ण कछुवा नेपालमा भेटियो
महिलाहरुको लागि प्या ड भन्दा महिना वारी कप राम्रो, सबै महिलाहरूले पढेर कसरी प्रयोग गर्ने जान्नुहोस